Tatitry ny Mpisera: Mpikaroka Manazava Ny Fiavian’ireo Rindrambaiko Mpisompatra · Global Voices teny Malagasy
Topimason'ny Tatitry ny Mpisera momba ireo fanamby, fandresena, zo niomerika
Voadika ny 03 Avrily 2019 5:45 GMT
Sary noforonin'i Hugh D'Andrade avy amin'ny Electronic Frontier Foundation (eff.org)
Manome topimaso amin'ireo fanamby, ireo fandresena ary ireo fironana vaovao mipongatra momba ny zo niomerika erantany ny Tatitry ny Mpisera an'ny Global Voices Advox
Miha-mitombo be ny fampahafantaran'ireo mpikatroka sy mpanao gazety erantany ny famelezan'ireo rindrambaiko mpisompatra, izay toa avy amin'ireo mpanafika tohanan'ny Fanjakana, matetika mampiasa teknolojia vidian'ireo orinasa mpanara-maso toy ny Hacking Team sy ny Gamma International.
Na dia toy ny vaovao ratsy aza ireny fanafihana ireny – ary mitombo ny isan'ireo olona manambara hoe naharay azy ireny – dia nahafahan'ireo mpikaroka nampivelatra fahaizamanao mismisy kokoa hitiliana ny fiavian'ireo singa mpamorona azy sy ny fihavian'ireo rindrambaiko ireo ny nipoiran'ireny rindrambaiko mpisompatra ireny, nitondra hazavana ihany koa mikasika izay matetika toa mitovy amina teknolojia misitery.
Tatitra iray vaovao nataon'ny Citizen Lab no nitondra hazavana mikasika ny fanentanana iray naharitra efatra taona momba ny fanafihana fisomparana nikendrena hamelezana ny imailaka sy ireo kaonty Twitter an'ireo mpanao gazety, mpikatroka ary ireo mpanohitra tany EAU (Emirà Arabo Mitambatra). Ireo fanafihana lazain'ny Citizen Lab fa avy amin'ny antsoin-dry zareo hoe “Stealth Falcon” (Falcon furtif), dia mety misy hifandraisany amin'ny governemanta any EAU. Fara faharatsiny olona enina nokendrena tamin'ireo fanafihana ireo no voasambotra, na nokarohana, na nohelohina tamin'ny fitsaràna tsy natrehana tany EAU noho ny asan'izy ireo teo amin'ny Twitter. Tsy tokony hahagaga izany – ny Emirà Arabo Mitambatra no mpanjifa goavana faharoa ho an'ilay orinasa mpamokatra rindrambaiko mpitsikilo Hacking Team : ary vola maherin'ny 634.500 dolara no narotsak'izy ireo ho an'ila orinasa mba hanelezana an'ireo rindrambaiko mpitsikilo hitiliana olona 1.100.
Misy fanantenana ny hisian'ireo fikarohana maromaro mitovy amin'io hivoaka ao anatin'ny volana vitsivitsy ho avy. Kendren'ny tetikasa iray vaovao hanaovana rindrambaiko ifarimbonana, natomboky ny tarika mpikaroka momba ny fiarovana , naka anarana hoe Digital Freedom Alliance (Vovonana ho an'ny fahalalahana nomerika), ny handrakitra ireny tranga ireny amin'ny alalan'ny fanangonana an'ireo angondrakitra mikasika ireo rindrambaiko mpisompatra tohanan'ny Fanjakana iray miainga avy any amin'ny toerana iray toy ny Citizen Lab sy ny TargetedThreats.net. Vinavinan'ny fikambanana ny hamokatra sarintany ametrahana ireo fandrahonana ireo, manondro ny karazana rindrambaiko mpisompatra nampiasaina, ny karazana lasibatra, ny datin'ny namelezany sy ny toerana nisy ny lohamilina nampiasaina hibaikoana an'ireo rindrambaiko mpisompatra.
Hakaton'i Ghana ve ireo vovonana media sosialy mandritry ny andron'ny fifidianana?
Na dia nampanantena ny tsy hanapaka ireo fampiharana anaty finday ahafahana mandefa antso an-telefona toy ny WhatsApp sy ny Skype aza ny minisiteran'ny Serasera an'i Ghana, vinavinan'ny polisy Ganeana ankehitriny ny hanakana ny fidirana amin'ireo tolotra [teny frantsay] amin'ireo media sosialy mandritra ireo fifidianana solombavambahoaka amin'ny volana novambra. Nanambara tamin'ny mpanao gazety ny Inspektora Jeneralin'ny polisy, John Kudalor, nanao hoe:
.. Raha toa hita fa ilaina izany ny andro mialoha sy ny andron'ny fifidianana, ho sakananay avokoa ireo media sosialy rehetra tahaka izay nataon'ireo firenena hafa. Mieritreritra an'io olana io izahay. Hosaininay ihany koa ny fomba iray hafa: mba ho afaka hanana [ny kaonty] media sosialiny manokana ihany koa ny mpitandro filaminana mba ho afaka hanakana an'ireo zavatra ara-potoana.
Nanohitra mafy ity sosokevitra ity ireo mpisolovava mafy, ireo mpanao gazety sy ireo olom-pirenena mpanao aterineto, izay naneho ny tahotra hoe hanaradia ny savalàlana nataon'ireo fitondràna tsy refesimandidy toa an'i Ogandà ilay iray amin'ireo demokrasia tena matanjaka indrindra ao amin'ny tanibe.
Manadihady mikasika an'ireo mpikatroka ara-politika ny mpitandro filaminana ary naka ny fitaovana elektronikan'izy ireny
Nanokafan'ny polisy ao Singapour fanadihadiana ny mikasika ilay blaogera ara-politika iray, Roy Ngerng sy ilay mpisolovava mpiaro zon'olombelona, Teo Soh Lung, amin'ny filazana fa nanitsakitsaka ireo fitsipika mifehy ny doka fanao amin'ny fifidianana izy ireo tamin'ny famoahana hafatra teo amin'ny Facebook, ny alina mialoha sy ny andron'ny fifidianana. Tamin'ny 31 may, , taorian'ireo fakàna am-bavany naharitra ora roa, nanao fisavàna ny tranon'izy ireo tsirairay avy ny polisy, naka ireo fitaovana elektronika, anisan'izany ireo solosaina fampiasa any amin'ny birao, ireo solosaina finday, ireo ‘disque dur’, ary finday, tsy nisy fampisehoana akory ny taratasy fahazoandalàna misava, na teo aza ny fangatahan'ny mpisolovava an'i Me Soh Lung. Taorian'ny fisavàna, voatery nilaza ny tenimiafin'ny solosaina findainy i M. Ngerng, ny telefaona findainy ary koa ny kaonty Facebook-ny.
Tany aloha tany dia efa niatrika ny fiampangana nataon'ireo tomponandraikitra tany aloha i M. Ngerng sy Me Soh Lung. Me Soh Lung, mpisolovava iray sady kandidà taloha avy amin'ny Antoko demokratika ao Singapour, dia notànana am-ponja tsy nasiana nandalo tamin'ny faran'ny taona 1980 teo ambanin'ny lalàna mikasika ny fiarovana anatiny, ny Internal Security Act ao Singapour.
Nofonjaina ny alzeriàna mpikatroka sendikaly iray noho ny fitsikeràny teo amin'ny Facebook ny fanapahankevitra ara-pitsaràna iray
Ny fitsaràna ambaratonga voalohany ao an-tanàn'i Laghouat, ao Alzeria, dia manameloka enimbolana an-tranomaizina ny mpikatroka mpiaro ny zon'ny mpiasa [teny frantsay], noho ny lahatsary izay nalefany teo amin'ny Facebook. Tao anaty lahatsary, Belkacem Khencha, mpandrindra nasionaly ny Ligy alzeriana ho fiarovana ny zon'ireo mpiasa, dia nitsikera ny fanapahan-kevitra iray navoakan'ny Tribonaly nanameloka namana iray sy mpikatroka iray hafa, 18 volana an-tranomaizina, noho ny nanoheran'izy ireo ny politikan'ny governemanta momba ny trano fonenana. Notsarain'ny Tribonaly fa i M. Khencha dia nanitsakitsaka ny lalàna famaizana alzeriana, izay mandrara ny “fitsikeràna an'ireo fanapahankevitry ny fitsaràna”.
Manapaka ny fifandraisana an-tambajotran'ireo Venezoelana sy manery azy ireo hiaina anaty haizina (ara-bakiteny) ny tsy fisian'ny herinaratra
Miharatsy hatrany ny kalitaon'ireo fifandraisana an-tserasera sy amin'ny Aterineto raha toa miha henjana kosa ny krizy ara-toekarena sy ara-politika ao Venezoela. Ao anatin'ny finiavany hitsinjara herinaratra, nametraka fandaharam-potoana fanapahana herinaratra maharitra telo na efatra ora isanandro eo amin'ny ankapobeny manerana ny firenena ireo tomponandraikitra, mahatonga ireo asam-bahoaka sy ireo asa matihanina marobe tsy handeha. Miteraka fahasimbana amin'ireo fitaovana sy amin'ireo finday ireny fanaphana ireny no sady mametraka olana amin'ny fifandraisana mandritra ny ora maro aorian'ny famerenana ny herinaratra. I Venezoela ihany koa amin'izao fotoana izao no manana ny iray amin'ireo fifandraisana Aterineto izay tena miadana indrindra ao Amerika Latina – araka ny voalazan'ny Akamai sy ny vondrona Venezoelana iray mpanao fikarohanaeo amin'ny Aterineto Acceso Libre – 1,5 Mbps no hafainganam-pandehan'ny Aterineto ho an'ireo Venezoelana tamin'ny taona 2015.
Fiporitsahan'ireo angondrakitra goavana amantarana ny toerana misy ireo fifamotoanan'ny pelaka, mahatonga ireo mpampiasa ho tandindonin-doza.
Ireo fampiharana natao ho an'ny fifamotoanan'ireo pelaka, toy ny Grindr, Hornet ary ny Jack'd dia afaka mampivoaitra amin'ny antsipirihanyireo angona mikasika ny toerana misy ny mpampiasa miaraka amina fetrana hadisoana iray metatra monja, araka ny voalazan'ny tahirin-kevitra navoakan'ny mpikaroka iray avy ao Kyoto momba ny fiarovana, vao haingana. Afaka azo foana ireo torohay mikasika ny toerana azy na dia safidin'ilay mpampiasa aza ny hanafina ny toerany ao anatin'ireo fandrindràna ao anatin'ilay fampiharana. Mampitaintaina manokana izany ho an'ireo mpampisa ireny tranonkala ireny any amin'ireo faritra izay ianahan'ny fankahalàna pelaka na tsy ara-dalàna ny fihetsika pelaka.
Tetiandron'ny famoretana ao Tiorkia
Miaraka miasa amin'ny Kaomity Mpiaro ny Mpanao Gazety i Özgür Öğret, tiorka mpanao gazety, mba hamokatra tatitra iray isankerinandro, nomena lohateny hoe “Tetiandron'ny famoretana ao Tiorkia”, ka ao anatiny no amaritany ny fandrahonana misy ankehitriny ataon'ny governemanta amin'ireo mpanao gazety nomerika sy ireo efa nahazatra, raha vao manao tatitra momba ny poltika, ny herisera ary ny kolikoly ao Tiora. Vakio ato ny lahatsoratra tamin'ity herinandro ity.
Safer, Smarter Journalism: Survey on Digital Security in South Asia’s Media – International Federation of Journalists and South Asia Media Solidarity Network ……Asa fanavaon-gazety am-pitoniana, am-pisainana: Fanadihadiana mikasika ny fiarovana nomerika ao anatin'ireo media ao Azia Atsimo – Federasiona Iraisam-pirenena an'ireo Mpanao Gazety sy ny Firaisamnkina an-Tambajotran'ireo media ao Azia Atsimo
Stifling Dissent: The Criminalization of Peaceful Expression in India – Human Rights Watch …..(Fanakendàna ny tsy mitovy hevitra: Fanamelohana ny fahalalahana maneho hevitra milamina ao India – Human Rights Watch)
Keep Calm and (Don’t) Enable Macros: A New Threat Actor Targets UAE Dissidents – (Citizen Lab Restez calme et (N’)activez (pas) les macros: Une nouvelle menace contre les dissidents des EAU – Lab Citizen) ………….. Milamina ary (aza) velomina ireo ‘macros': Mpisehatra iray amin'ny Fandrahonana mikendryireo Mpanohitra ao EAU – Citizen Lab)
Ellery Roberts Biddle, Marianne Diaz, Weiping Li, Sarah Myers West, ary Kofi Yeboah no nandray anjara tamin'ny fanoratana an'ity lahatsoratra ity.